Xirmo bilaash ah: 900 oo ficil oo loogu talagalay Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Waxqabadka Adobe Photoshop wuxuu noqon karaa aalad aad u xiiso badan. Kuwa aad uga horumarsan dalabku waxay awoodi doonaan inay waqti badan ku badbaadiyaan mashruucyadooda isla markaana dadka bilowga ah waxay awoodi doonaan inay ogaadaan waxa uu yahay qaabdhismeedka gudaha ee ku gabanaya saamaynta. Hal abuurka tooska ah ee loo yaqaan 'Creativos Online' waxaan ku daabacnay xirmooyin iyo maqaallo ku saabsan ficilada iyo waliba casharro qaar oo lagu barto sida loo sameeyo automate oo samee iyaga.
Munaasabaddan waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaago xirmo wax ku ool ah oo ku siin doona wax intaa ka badan oo aan ka yareyn noocyo kala duwan oo 900 ah. Yaan rabin 900 saamaynta inuu rakibo oo dalbado? Markaad soo dejiso xirmada oo aad galiso galka, waxaad ku ogaan doontaa waxyaabo kala duwan oo la yaab leh oo leh shaybaarkooda u dhigma kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad doorato oo aad ku dabaasho midka adiga aadka kuu xiiseynaya. Anigu shakhsiyan badanaa uma isticmaalo noocyadan waxyeellooyinka ah, laakiin waxaan xusuustaa in markii aan bilaabayay dalabka aan u adeegsaday ficillo iyo mashaariic qaab PSD ah oo xirfadlayaal aad u badan dib u eegis ku samee qaab dhismeedka gudaha ee curinta, adeegsiga saameynta iyo faahfaahinta kale.
Xusuusnow haddii aad haysato xirmo kheyraad xiiso leh waad nala wadaagi kartaa qeybta faallooyinka iyo sidoo kale haddii aad dhibaato ku aragto markii aad soo degsaneyso feylka. Caadi ahaan, waad noo sheegtaa oo waan xallinaynaa sida ugu dhakhsaha badan. Waxaan ka tagayaa iskuxiraha hoosta oo adoon sii dheerayn waxaan rajeynayaa inaad ka faa iideysato oo aad sida ugu badan uga faa iideysato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Xirmo bilaash ah: 900 oo ficil oo loogu talagalay Adobe Photoshop
Lama soo dejin karo, 404 qalad ayaa ka muuqda shaashadda
Jawaab Anibal Tarqui